My Team: Gtalk မှာ Group chat (party chat) လုပ်နည်းလေးပါ
Gtalk မှာ ကိုယ်ပိုင် Group Chat လေးလုပ်ပီး chat box တစ်ခုထဲမှာ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်...ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့ အစည်း..လုပ်ငန်းသုံးအတွက် group chat လေးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ပါ..ကဲ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ...
ပထမဆုံး http://partychapp.appspot.com/ ဆိုတဲ့နေရာလေးကို သွားလိုက်ပါ ...ရောက်သွားပီဆိုရင်အောက်မှာ How do I createaRoom? ဆိုတဲ့ စာလေးတွေ့ လိမ့်မယ် ..အဲ့ဒီအောက်က sing in နေရာမှာ ကိုယ့် gmail နဲ့sing in ၀င်လိုက်ပါ...ပီးတာနဲ့Allow လုပ်လိုက်ပါ..ပီးတာနဲ့အောက်ပုံလေးမှာပါတဲ့ Createanew room ဆိုတာလေးကို ကလစ်နှိပ်ပါ
ပီးတာနဲ့ အောက်ကလိုလေးထပ်ပေါ်လာမယ်......
အဲ့ဒီက Room name မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည်လေးထည့်ပါ..
Room type မှာတော့ Invite-only နဲ့Open ဆိုပီးနှစ်မျိုးပါပါတယ်...
Invite-only ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ chat room မှာ ကိုယ်တိုင် invite လုပ်ထားတဲ့ လူတွေကလွဲပီး အပြင်လူတွေဝင်ရောက်ပြောဆိုလို့ လုံးဝရမှာမဟုတ်ပါ...
Open ကိုရွေးချယ်ထားရင်တော့ chat room လိပ်စာသိတဲ့လူတိုင်း ၀င်ရောက်ပြောဆိုလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပီးသွားပီဆိုရင်တော့ Other to invite : ဆိုတဲ့ အကွက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ gmail ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ... ပီးတာနဲ့Create! ကို နှိပ်လိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် group chat လေးတစ်ခု ရသွားပီးပေ့ါခင်ဗျာ.....ပီးရင် the room's page ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ chat room page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်... ရောက်သွားပီဆိုရင် အောက်နားက Invite People: ဆိုတဲ့အကွက်လေးထဲမှာ ကိုယ် invite လုပ်ချင်တဲ့လူရဲ့ gmail ကိုထည့်ပီး invite လုပ်လိုက်ရင်ရပါပီ...ပီးတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ gtalk မှာ ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ လိပ်စာနဲ့invite တစ်ခုရောက်နေပါလိမ့်မယ်...လက်ခံလိုက်ပါ..ပီးတာနဲ့ကိုယ်က invite လုပ်ထားတဲ့လူတွေက လက်ခံပေးပီးပီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ chat room လေးထဲမှာ ပြောချင်တာကို group chat အနေနဲ့ ပြောလို့ ရပီပေ့ါဗျာ....ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျတော့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေတွေလည်း သိလောက်ပီပေ့ါဗျာ...
လေကြောရှည်လက်စနဲ့ တလက်စထဲ့ chat room အသုံးပြုပုံလေးထပ်ပြောပြပါ့မယ် :)
chat room ထဲမှာ နာမည်ရေးချင်တယ်ဆိုရင် /alias * နာမည်* ဆိုပီးရိုက်ပါ..နာမည်နေရာမှာတော့ ကိုယ်ရဲ့နာမည်ပေ့ါ...ပီးရင် enter ခေါက်တာနဲ့ကိုယ်ရဲ့နာမည်ကို အမည်းရောင်(bold) လေးနဲ့ သူများတွေကမြင်နေရပါလိမ့်မယ်...
chat room ထဲကလူတွေဘယ်သူအွန်လိုင်းမှာလက်ရှိ ရှိနေတယ်ဆိုတာသိချင်ရင် /list ပီးရင် enter...
ခဏနေတာနဲ့chat room ထဲမှာ invite လုပ်ထားတဲ့ gmail တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..အွန်လိုင်းမှာလက်ရှိ ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ gmail ဘေးမှာ (online) ဆိုပီးရေးထားတာတွေပါလိမ့်မယ်..
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့chat room ကနေထွက်ခွာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ /leave ကိုရေးပီး enter နှိပ်လိုက်ပါ...
ပြန်ပီးဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုရေးပီး enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဝင်ပီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်...
Gtalk party chat လုပ်တာလေး နဲ့ ပတ်သတ်ပီးအဆင်မပြေတာလေးတွေမေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ comment လေးချန်ထားပေးပါ...
Labels: (IT) နည်းပညာ, Partychat